Iigundane ziphinda ziveze eGuam kunye nogonyo lubandakanyiwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » Iigundane ziphinda ziveze eGuam kunye nogonyo lubandakanyiwe
isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGuam Breaking • Iindaba zeMpilo • iindaba • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Julayi 19, 2021
Akukho ndawo ingcono ehlabathini yokuqhuba inkomfa xa umvuzo kukugonywa. IGuam iyayifumana kwaye yamkela iqela lokuqala le-MICE labali-100 befika bevela eTaiwan kunxweme lwayo.
Ukufika kwe-VIP ngomculo we-Guam kunye neenkokheli zokhenketho ze-GVB zamkele iintlanganiso zokuqala, Inkuthazo, iNdibano kunye neMiboniso (MICE) iqela laseTaiwan izolo e Won Pat International Airport. Eli qela beliyinxalenye yenkqubo eyaziwayo kwilizwe jikelele yomoya kunye neV.
I-ADATA Technology Co, Ltd. ixhase ngaphezulu kwe-100 yabasebenzi bayo ukuba bandwendwele iGuam benokhetho lokugonywa. Inkampani yimemori kunye nokugcinwa kwemveliso eTaiwan ebekwe kwindawo yesibini kwihlabathi ngobukhulu bemodyuli yemodyuli enexabiso lentengiso le- $ 680 yezigidi.
Inkxaso-mali yabasebenzi ye-ADATA ibandakanya imali yomoya, indawo yokuhlala ehotele, kunye neendleko zokugunyaziswa bodwa xa bebuyela kwilizwe labo. I-ADATA ikwakhuthaze abasebenzi bayo ukuba bameme amalungu osapho lwabo ukuba athathe inxaxheba kolu khuthazo.
"Sonwabe kakhulu ukwamkela eli qela, kwaye sifuna ukubulela i-ADATA ngokukhetha iGuam njengendawo abayithandayo," utshilo uMongameli we-GVB kunye ne-CEO uCarl TC Gutierrez. "Lo ngumzekelo ogqibeleleyo wokuba inkqubo yethu yomoya V&V ibanceda njani abantu kunye neenkampani ezifuna ukuhamba ngokukhuselekileyo kunye nethuba lokugonywa kunye nokuphumla kwiparadesi yesiqithi."
Ilungu leqela le-ADATA lifika eGuam lidanisa umculo wasekhaya
Iqela le-ADATA, elifike ngenqwelomoya yenqwelomoya ye-EVA, lihlala eHyatt Regency Guam nakwiThe Tsubaki Tower iintsuku ezine.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo inkqubo phakathi kweTaiwan neGuam yaphehlelelwa iindwendwe recece isitofu sokugonya ngelixa useholideyini le ndawo intle yaseMelika kuLwandlekazi lwePasifiki.
Malunga noMoya weV & V
Inkqubo ye-V & V yomoya yaphuhliswa liZiko leeNdwendwe laseGuam ukukhuthaza abo baneminyaka eli-12 nangaphezulu ukuba bafumane iyeza lokugonya le-COVID-19 ngelixa bekwiholide eGuam. Abathathi-nxaxheba banokukhetha kwiiphakheji zokuhamba kunye nezotyelelo eziye zaphuhliswa ngentsebenziswano norhwebo lokuhamba lwaseGuam, ihotele, kunye namaqabane ezonyango. Le nkqubo yenzelwe ukuba iqalise ishishini lezokhenketho laseGuam ngelixa ibalaselisa umoya ofudumeleyo weHafa Adai kunye nokubuk 'iindwendwe kwabantu baseGuam.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nenkqubo ye-V & V yomoya, yiya ku utyelelo.com/airvv okanye i-imeyile [imeyile ikhuselwe].
Umphathiswa Wezokhenketho Undwendwela uKhenketho oluncinci ...
I-Cathay Pacific Airways ibuyela ePittsburgh ...
Amaqabane eSelo Group kunye nompheki owaziwayo uMeyrick ku ...
Amakhulu abantu abagonyelweyo ababhedlele ezibhedlele e-UK nge ...
ICanada iyakwalela konke ukuhamba ngenqwelomoya kwabahambi abavela eMorocco
Isibhakabhaka seenqwelomoya saseLondon iHeathrow siTshintsha iBlue ku ...
I-imeyile "Yokwazisa ngobuqhetseba be-IATA" iya kuthi ...
Uloliwe omtsha wexabiso eliphantsi ukusuka eLondon ukuya e-Edinburgh
Impembelelo yokuwa kwe-Afghanistan kwihlabathi ...
Njengoko i-COVID-19 eyahlukileyo inyuka, iimaski zobuso kwiinqwelomoya ...